Testicular Torsion (ဝှေးစေ့လိမ်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Testicular Torsion (ဝှေးစေ့လိမ်ခြင်း)
Testicular Torsion (ဝှေးစေ့လိမ်ခြင်း) ကဘာလဲ။
ဝှေးစေ့လိမ်ခြင်းဆိုတာ အမျိုးသားတော်တော်များများ ဖြစ်တတ်ကြတဲ့ ရုတ်တရက်ပြင်းထန်စွာနာကျင်ခြင်း အကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဝှေးစေ့လည်ခြင်းကြောင့် သုတ်ရည်ကြောလိမ်သွားပြီး ကပ်ပယ်အိတ်သို့ သွေးလျောက်မှုကို ရပ်တန့်သွားစေပါတယ်။ လူအများစုကတော့ ဝှေးစေ့တစ်ဖက်တည်းသာဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဝှေးစေ့နှစ်ဖက်လုံးဖြစ်တာမျိုးကတော့ ရှားပါတယ်။ လူငယ်အများစုမှာဖြစ်တတ်ပေမဲ့ လူကြီးပိုင်းနဲ့ သနေသားဘ၀ ကပင်ဖြစ်တတ်တာလည်း ရှိပါတယ်။
Testicular Torsion (ဝှေးစေ့လိမ်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Testicular Torsion (ဝှေးစေ့လိမ်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ဝှေးစေ့လိမ်ခြင်းရဲ့ အဓိကဖြစ်တဲ့ လက္ခဏာကတော့ ကပ်ပယ်အိတ် နာကျင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ နာကျင်ခြင်းနဲ့ အတူ ကပ်ပယ်အိတ် တစ်ဖက်(သို့) နှစ်ဖက်လုံးဖောင်းပြီးရောင်လာပါမယ်။ မစို့မပို့နာရာကနေ ပြင်းထန်စွာနာကျင်တဲ့အထိဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဝှေးစေ့တစ်လုံးသည် ပုံမှန်ထက်အပေါ်သို့ပိုရောက်နေခြင်း၊ တစောင်းဖြစ်နေခြင်း။
Testicular Torsion (ဝှေးစေ့လိမ်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ဝှေးစေ့လိမ်ခြင်းဆိုတာဟာ အတွင်းရောဂါတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သလို ပေါင်ခြံကို ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတာကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မွေးရာပါဒီလိုရောဂါရှိတဲ့သူတွေကတော့ ရောဂါအခြေအနေမဆိုးသေးခင်အထိ သတိပြုမိလေ့မရှိကြပါဘူး။ ပုံမှန်အချိန်မှာဆိုရင် ဝှေးစေ့ဟာ ကပ်ပယ်အိတ်ထဲမှာ လှုပ်လို့မရပါဘူး။ ဝှေးစေ့ထဲမှာ ရှိတဲ့ ကြွက်သားနဲ့ တစ်ရှုးတွေက ဝှေးစေ့ကို တင်းကျပ်စွာ ထိန်းထားပါတယ်။ ကပ်ပယ်အိတ် ကြွက်သားနဲ့ တစ်ရှုးတွေ လျော့တွဲနေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ ဝှေးစေ့ဟာ လွတ်လပ်စွာ လှုပ်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲလိုဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ဝှေးစေ့လိမ်သွားဖို့ အန္တရာယ်တော်တော်များနေပါပြီ။ နေထိုင်မှုပုံစံမမှန်ခြင်း၊ ပေါင်ခြံကြားထိခိုက်မိခြင်းနဲ့ အိပ်သည့် ပုံစံမမှန်ခြင်းတို့ကြောင့်လည်း ဖြစ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်ကို တိုးပွားလာစေနိုင်ပါတယ်။
ငါ့ဆီမှာ Testicular Torsion (ဝှေးစေ့လိမ်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာ်တွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ထိုအချက်အလက်များနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး သိချင်သည်များရှိပါက ဆရာဝန်ဖြင့် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပေးပါ။
Testicular Torsion (ဝှေးစေ့လိမ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
Testicular Torsion (ဝှေးစေ့လိမ်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ဝှေးစေ့လိမ်ခြင်းဖြစ်နေပြီဆိုလိုရှိရင် ဆရာဝန်နဲ့တွေ့ပြီး ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဝှေးစေ့ကိုသွေးစီးဆင်းမှုလျင်မြန်စွာပြန်လည်ရရှိစေနိုင်ဖို့ ခွဲစိတ်မှုကိုစောနိုင်သမျှစောစောလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ အကယ်လို့ ဝှေးစေ့ကို သွေးစီးဆင်းမှု ၆ နာရီအထက်ပိတ်နေခဲ့မယ်ဆိုလျှင် ဝှေးစေ့တစ်ရှုးများ ပုပ်သွားပြီး ခွဲစိတ်ထုတ်ပစ်ရပါလိမ့်မယ်။ တစ်ချို့ တွေမှာဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်က ကပ်ပယ်အိတ်ကို ခွဲစိတ်ဖွင့်ချပြီးတော့ လိမ်နေတဲ့ ဝှေးစေ့နဲ့ သုတ်ကြောကို ပြန်ဖြည်ပေးပါလိမ့်မယ်။
ကလေးတွေမှာ ဝှေးစေ့လိမ်ခဲ့တယ်ဆိုရင် ကုသမှုဟာပိုမိုရှုပ်ထွေးနိုင်ပါတယ်။ ကလေးတွေကိုမေ့ဆေးပေးရခြင်းဟာလည်း အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ စိတ်ချပြီး ကျွမ်းကျင်တဲ့ ခွဲစိတ်ဆရာဝန်သာလျှင် အရေးပေါ်ခွဲစိတ်မှုကို ပြုလုပ်ပြီး ဝှေးစေ့တစ်ခုလုံးဒါမှမဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်မှာပါ။ သို့မှသာ လိမ်မနေပဲ အကောင်းရှိတဲ့ ကျန်ဝှေးစေ့တစ်လုံးကိုပါ လိမ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်မှာပါ။ ကောင်းမွန်စွာခွဲစိတ်အောင်မြင်မှသာ နောက်ဆက်တွဲဝှေးစေ့ပြသနာတွေနဲ့ မျိုးမအောင်ခြင်း ပြသနာတွေကို မဖြစ်လာအောင် တားဆီးနိုင်မှာပါ။
ဝှေးစေ့လိမ်ခြင်းရဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြသနာတွေကို ရှောင်ကြဉ်နိုင်ဖို့အတွက် ဆေးပညာအကူအညီကို လျင်မြန်စွာရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ သွေးစီးဆင်းမှုအချိန်ကြာမြင့်စွာ ပိတ်နေခဲ့ရင်တော့ ဝှေးစေ့တွေကို ဖြတ်ထုတ်ပစ်ရပါမယ်။ အဆင်မြင့် ဆေးပညာတွေနဲ့စောစီးစွာ ကုသမှုခံယူခဲ့မယ်ဆိုရင် သင်နဲ့သင့်ကလေးတို့က လျင်မြန်စွာ လုံးဝပျောက်ကင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
Porter, R. S., Kaplan, J. L., Homeier, B. P., & Albert, R. K. (2009). The Merck manual home health handbook. Whitehouse Station, NJ, Merck Research Laboratories. Page 1471.